Nkọwa teknụzụ niile nke Motorola One Zoom apụtala | Androidsis
Lenovo bu n’obi malite ekwentị ohuru site na Motorola, nke ekwuru na obu Otu Motorola. Ejirila ngwa ọrụ a n'oge gara aga yana, dị ka aha ya si dị, ọ ga-abịa na sistemụ igwefoto dị ike dị n'azụ, nke a ga-ahụ ya nke ọma site na oghere nwere ike inye ọkwa dị elu.
Na ohere ọhụụ a, Isi atụmatụ na ụdịdị nke ekwentị a dị n'etiti etiti agbapụla n'ebube ha niile. Na mgbakwunye, anyị debere ọtụtụ onyonyo a sụgharịrị nke ọdụ a nke pụtara n'oge na-adịbeghị anya, nke anyị nwere ike nweta otu echiche nke ihe ọ ga-enye anyị.
Dị ka ọnụ ụzọ ahụ si dị 91Mobiles nwere nkọwa zuru ezu na akụkọ ya, Motorola One Zoom - nke a kpọtụrụ aha na mbụ dị ka Otu Pro- ga-enwe FullHD + mkpebi ihuenyo nke 2,340 x 1,080 pikselụ. Na mgbakwunye na nke a, ekpughere na mbụ na diagonal nwere ike ịbụ nke a bụ 6.2 sentimita asatọ na ọ ga-enwekwa nkwado maka HDR.
Motorola One Zoom na agba ntụ, agba aja aja na odo odo
N'aka nke ọzọ, ọnụ ya ga-anabata usoro ikpo okwu Snapdragon 675 site na Qualcomm, 4/6 GB nke Ram na ebe nchekwa nke 64/128 GB, n'otu n'otu, yana NFC chipset iji kwụọ ụgwọ akpaghi aka (enweghị kọntaktị). Dị ka a ga - asị na nke a ezughi, ọ ga - etu ọnụ na batrị 4,000 mAh nwere nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa.
Ekwuru na Motorola One Zoom ka akwado ya 48 megapixel mkpebi azụ igwefoto isi igwefoto na Quad Pixel teknụzụ, mgbe nke abụọ na-akpalite ga-adaba na 12 MP. A ghaghị ịgbakwunye nke a na ihe mmetụta nke atọ, nke ga-abụ onye na-agba egbe 8 MP. Igwefoto nke anọ, ka ọ dị ugbu a, agbanyebeghị, yabụ na anyị amaghị nkọwapụta teknụzụ ya ma ọ bụ mkpebi ya. Dịtụ, nhazi igwefoto ga-enye OIS abụọ, 1.6 micron pixel size, yana 13mm to 81mm focal length. Ọ ga-enye mbugharị ngwakọ 5x na ihe mmetụta 16 MP n'ihu.
Pricegwọ a mobile ga-abụ ihe dị ka euro 429. Mmemme teknụzụ IFA nke afọ a nwere ike ịbụ ebe mmalite ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nkọwapụta teknụzụ niile nke Motorola One Zoom apụtala
N'oge na-adịghị anya WhatsApp ga-enwe otu ọrụ kacha mma nke Instagram